कूटनीतिज्ञबाट शान्ति प्रक्रियाका विषयमा अनावश्यक चर्चा गरिनु गलत : शर्मा | Matrisandesh
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता एवं सांसद जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले नेपालमा कूटनीतिज्ञबाट शान्ति प्रक्रियाका विषयमा अनावश्यक चर्चा परिचर्चा भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूतहरूले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा बोल्दा पनि त्यसबारे परराष्ट्रमन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको भन्दै उनले त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न पक्षसँग अनावश्यक रूपमा कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिले भेटघाट गरेको प्रति उनले आपत्ति जनाएका हुन । उनले भने,“नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूतहरूले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा बोल्नुभयो । यसको बारेमा परराष्ट्रले के गर्‍यो खै ? हामीले केही जानकारी पाएनौ । परराष्ट्रलाई केही थाहा छ कि छैन ? उहाँहरू त्यसरी बोल्ने हो कि होइन ? कसलाई हामी थुन्छौ कसलाई हामी के गर्छौ भनेर भन्न पाइन्छ कि पाईदैन ? यसको बारेमा के गर्‍यो परराष्ट्रले जनताले थाहा पाउनुपर्दैन त्यो कुरा ? नेकपा नेता प्रभाकरले नेपाल कुनै देशको निर्देशनमा नचल्ने बताए । उनले विदेशी कुटनितिकज्ञहरुबाट हुने हस्तक्षेपकारी कार्य रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् । विभिन्न देशका लागि नियुक्त गरिएका राजदूतले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार तथा नियुक्तिको मापदण्डमा ध्यान पुर्‍याउन पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले असंलग्न परराष्ट्र नीति स्पष्ट नभएकाले जनता दोधारमा परेको टिप्पणी गरे ।
प्रहरीका तीन डीआईजीलाई प्रहरी एआईजीमा बढुवा